ए मेरो हजुर ३ लाई सफलता: नयाँ बर्षको दिन दर्शक ओइरिए, हलमै भयो यस्तो ठेलाठेल (भिडियो सहित) « Onlinetvnepal.com
ए मेरो हजुर ३ लाई सफलता: नयाँ बर्षको दिन दर्शक ओइरिए, हलमै भयो यस्तो ठेलाठेल (भिडियो सहित)
Published : 14 April, 2019 8:10 pm
नया वर्ष बैशाख १ गते दर्शकहरुले सबै हलहरु खचाखाच भरिएको थियो । गत शुक्रबार दुई वटा नेपाली चलचित्र (ए मेरो हजुर ३ र यात्रा) रिलिज भएको थियो । प्राय सबै हलहरुमा नया बर्षमा ए मेरो हजुर ३ हेर्न आएका दर्शक धेरै देखिन्थे । कतिपय दर्शकहरु टिकट नपाएर फर्किएका पनि थिए । फिल्मको कथा राम्रो भए तथा त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता उत्कृष्ठ भएमा त्यो फिल्मलाई सबै दर्शकले रुचाउछन् । दर्शकहरुमा पनि आफ्नै देशमा बनेको फिल्मलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विकास भएको छ ।
राम्रो फिल्म बनेन भने उक्त नेपाली फिल्म नहेर्ने रोजाई दर्शकको हो । केही परिवर्तन भयो कि भन्ने आशा र विश्वासमा नेपाली दर्शकहरु हलमा पुग्छन् । त्यतिमात्र नभइ आफूलाई मन पर्ने कलाकारको फिल्म भनेर पनि हेर्न पनि हल पुग्ने गर्छन । तर ती कलाकारहरुले गरेको फिल्म पनि निराशाजनक भएपछि फिल्म हेर्न गएकोमा धिक्कार मान्दै फर्कन्छन् । जो कोही पनि फिल्म हलमा भरपुर मनोरञ्जन लिनको लागि पुग्छन ।
मनोरञ्जन नपाए उनीहरु पुनः दोहो¥याए फिल्म हेर्न जान गाह्रो मान्ने गर्छन । पछिल्लो समय नेपाली फिल्म जगतमा थोरै फरक भने पक्कै आउन थालेको छ । केही त्यस्तोे आभास दिलाएको छ फिल्म ए मेरो हजुर ३ ले पनि । शुक्रबारदेखि देशका सबै हलहरुमा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ए मेरो हजुर ३ हाउस फुल भएको फिल्मका निर्देशक झरना थापाले बताइन् ।
पिल्ममा सुहाना थापा र अनमोल केसीको मूख्य भूमिकामा छन । फिल्मको निर्देशन भने झरना थापाले गरेकी हुन् । यो फिल्मलाई निर्माण भने सुहाना ब्यानरमा सुनिल थापाले गरेका हुन् । फिल्म प्रदर्शन भन्दा अगाडि झै फिल्ममा पनि अनमोल र सुहानाको जोडीलाई दर्शकहरुले निकै रुचाएको पाइएको छ । केमेष्ट्री राम्रैसंग जमेको देखिन्छ । यो सुहानाको डेव्यु फिल्म हो । भिडियो सहित :
शिल्पाले जबर्जस्ती गरेकी थिइन् छविसँग बिहे ? बिहेका साक्षीले खुलाए पूर्वपतिका कुरा (भिडियोसहित)
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफ्नो श्रीमान छविराज ओझा विरुद्ध एकाएक प्रहरीमा उजु*री गरेपछि माहोल गर्माएको थियो
पुस्कल शर्माले आत्महत्या गर्न सक्छु भनेपछि रायमाझी परिवार मिडियामा | तलाई जेल हाल्छु….(भिडियो सहित)
चर्चित गायक तथा सर्जक पुश्कल शर्मालाई चोरीको आरोप लागेको छ । बिशाल रायमाझिको तिज गीत
पुस्कल शर्माले आत्महत्या गर्न सक्छु भनेपछि रायमाझी परिवार मिडियामा